January 11, 2021 - Padaethar
အမျိုးသမီး များသတိထားကြပါ… ဖြစ်သွားပြီးမှဆို မလွယ်ဘူး
January 11, 2021 by Padaethar
အမျိုးသမီး တစ်ဦးက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဖြည့်နေတုန်း သပ်သပ် ရပ်ရပ်ဝတ်စား ထားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ဦးက သူ့ကိုယ်သူ ကုမ္ပဏီ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်နဲ့ သူမကို ရည်ရည်မွန်မွန် မိတ်ဆက်ရင်း ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ လိုအပ်ရင် ဆက်သွယ်ဖို့ လိပ်စာကဒ်ကို ပေးခဲ့တယ်။ သူမကလဲ သဘောရိုးနဲ့လို့ ထင်မှတ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့ လိပ်စာကဒ်ကို လက်ခံပြီး ကားပေါ်ပြန်တက်လို့ မောင်းထွက် ခဲ့တယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီယောက်ျားဟာ တခြားလူရည်သန့်ယောက်ျား တစ်ဦးမောင်းတဲ့ ကားပေါ် တက်သွားပါတယ်။ ဓာတ်ဆီဆိုင်ထဲကနေ ကားမောင်း ထွက်လာတဲ့ သူမဟာ သူမရဲ့ ကားနောက် ကနေ စောစောက ယောက်ျားက တချိန်တည်းမှာပဲ နောက်ယောင်ခံ ကားမောင်း လိုက်လာတာကို နောက်ကြည့်မှန်က တဆင့် မြင်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ … Read more
သင့် ချစ်သူမှာ နောက်တစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အမူအယာများ
သင့်မှာ ချစ်သူ ရှိတယ်ဆိုရင် အောက်ပါ အခြေအနေတွေဟာ သူ့မှာ နောက်ထပ်တစ်ယောက် ရှိနေပြိဆိုတာ သိစေနိုင်မယ့် လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီး ချိန်ဆနိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖုန်းကို ကြောင့်ကျစိုက်နေရင် ချစ်သူတွေဘ၀မှာ တစ်ယောက်ရဲ့ဖုန်းကို တစ်ယောက်က ယူကြည့်တာဟာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းလို့ မယူဆတော့တဲ့ ခေတ်ကြီးကို ရောက်နေပါပြီ။ အရင်ကလည်း သင်ဟာ သူ့ဖုန်းကို ယူကြည့်လေ့ရှိတယ် … ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ဟာ ဖုန်းကို ယူကြည့်မှာကို စိုးရိမ်တဲ့အမူအယာ၊ မကြည်ဖြူတဲ့ အမူအယာမျိုး ပြနေပြီဆိုရင် သူမှာ တစ်ယောက်ယောက် ရှိနေပြီလို့ အကြမ်းဖျင်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ (၂) မပြောမဆို ရောက်လာမှာကို စိုးထိတ်နေရင် တစ်ခါတလေ သင် သူ့ဆီကို ရုတ်တရက်ရောက်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ မလုံမလဲ ဖြစ်နေတာတို့၊ … Read more
မကြာခဏ ခေါင်းလျှာ်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီး တွေအတွက် သိကောင်းစရာများ
သင့် ဆံပင် တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ မကြာခဏလျှော်နေတာတောင်မှ သိပ်မကြာခင် မြန်မြန်နဲ့ ပြန်ပြီး ညစ်ပတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးမှာ လူအတော်များများက မကြာခဏ သူတို့ဆံပင်တွေလျှော်ဖို့ အချိန် အလုံအလောက် မရှိကြပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ရှန်ပူနဲ့ ကလိုရင်းရေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့ခြင်းက သင့်ရဲ့ဆံပင်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆံပင်မြန်မြန်ညစ်ပတ်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းက ဘာလဲ? ဆီကြည်ဂလင်း သင့်ဦးခေါင်းအရေပြားပေါ်မှာ Sebum များကို ထုတ်လုပ်မှုသည် သင့်ဆံပင်ကို ကြည့်ရတာ ညစ်ပတ်ပြီး မလတ်ဆတ်ဘူးလို့ မြင်ရစေပါတယ်။ ဒီSebum ရဲ့ပိုလျှံထုတ်လုပ်မှုက ဒီအချက်များပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ၁။ အသက်အရွယ် (လူငယ်များရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် aတွက Sebum အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ပါတယ်) ၂။ လိင်( အမျိုးသားရဲ့ အရေပြားက အဆီ နဲ့ထိတွေ့မှု ပိုပြီးကျရောက်လေ့ရှိပါတယ်) ၃။ ရာသီ (အရေပြားက … Read more
အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ကောင်မလေးက အပျိုစင်တွေထက် ပိုပြီးလှပတယ်ဆိုတာ….
အိမ်ထောင်ကျပြီး အမျိုးသမီးတွေ လှပလာတယ် ဆိုတာဟာ…… ၁။ ခင်ပွန်းသည်က စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားလို့ တစ်ချို့ အမျိုးသမီးတွေ အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ပိုပိုလှလာတာကိုတွေ့ကြမှာပါ။ အဲဒါ ဘာကြောင့် လှပလာရသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းများစွာ ထဲမှာမှ ခင်ပွန်းသည်က စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတဲ့ အချက်လည်း သင် မမေ့ပါနဲ့။ ၂။ အိမ်ထောင်ရေး သာယာလို့… အိမ်ထောင်ရေး မသာယာတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အနေနဲ့ အလွန် စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ အတွက်….. အိမ်ထောင်ရေး သာယာလို့ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် အတွက်က စိတ်ပျိုလို့ ကိုယ်ပါနုလာတဲ့ သဘောပါ။ ၃။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ….. မေတ္တာ တရားဆိုတာ တိုင်းတာလို့မရ … Read more
အမျိုးသမီးတွေ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ဟလေ့မရှိတဲ့ အချက် (၄) ချက်
ရိုးသားမှုဆိုတာ ချစ်ခြင်းတစ်ခုမှာ အရေးအကြီးဆုံး မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သို့ပေမယ့်လည်း တစ်ချို့သော အတိတ်ဖြစ်ရပ် တွေဟာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြဖို့ အခြေအနေမပေးတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အတိတ်ဟာ အတိတ်ပဲဖြစ်ပြီးတော့ အတိတ်ကိုပြန်တူးဆွရင် လက်ရှိအခြေအနေတွေ ပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အတိတ်ဟာ လက်ရှိအချိန်ကို လာရောက်ထိခိုက်မှု မရှိစေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ အနောက်မှာပဲ ချန်ထားခဲ့တာ ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အလားတူ ရိုးသားစွာနဲ့ လိမ်ကောင်း လိမ်မိဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးကတော့ မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အမှန်အတိုင်း ဖွင့်ပြောလို့မရှိတဲ့ အရာ (၄) မျိုးအကြောင်း ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁)သူမ ပတ်သက်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အရေအတွက် သူမဟာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ပရောဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ သူမ ရည်းစား ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ ထားခဲ့ထားခဲ့ သင့်အနေနဲ့ သေချာတာကတော့ သူမဟာ အရေအတွက်ကို လိမ်ထားပါပြီ။ … Read more
(10-1-2021 to 16-1-2021)ထိ( ၇ )ရက်သားသမီများ တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်း
ကျော်ဘိုဘိုဟိန်း၏တစ်ပတ်စာခုနှစ်ရက်သားသမီးကံကြမ္မာဟောကိန်း (10-1-2021 to 16-1-2021) တနင်္ဂနွေသားသမီး ရပ်ဝေးခရီးကိစ္စ နိူင်ငံရပ်ခြားကိစ္စများ စီစဉ်ထားပါက အောင်မြင်ပါလိမ့်မည် ။ယခုကာလမှာ လှုပ်ရှားသွားလာမူတွေ ပိုများနေပါလိမ့်မည် ။ ကျန်းမာရေးမှာ ခေါင်းမူး ခေါင်းနောက် ဝေဒနာခံစားရတတ်ပါသည် ။ ငယ်ရွယ်သူများ အချစ်ရေးတွင် အနေနီးစပ်သူနှင့်ချစ်သူရည်းစား ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ထီ ၃ ၀ ပါသော ထီ ထိုးပါ ။ယတြာ….. စနေနေ့တွင် နေအိမ်ဘုရား၌ နှင်းဆီပန်း၃ပွင့်လှုပေးပါ ။ တနင်္လာသားသမီး သင်တန်းတက်ရခြင်း ပညာရပ်တစ်ခုခုကိုလေ့လာရခြင်း သုတေသနပြုရခြင်းများပြုလုပ်ရပါမည် ။ခရီးအနီးထွက်ရမည် ကောင်းသောခရီးပါ ။ အရောင်းအဝယ်ကိစ္စတွေလည်း ထင်ထားတာထက်ပို အကျိူးအမြတ်ရရှိပါလိမ့်မည် ။ ကျန်းမာရေးတွင် အဆစ်အမြစ်များနာခြင်း ဇက်ကြောမကြာခဏတက်ခြင်းများ ဖြစ်နေတတ်ပါသည် ။ချစ်သူရည်းစားမရှိသေးသူများ ချစ်သူရရှိမည်ကာလပါ…။ ထီ၂.၀ ပါသောထီကိုထိုးပါ…..။ယတြာ……..လူသွားလမ်းပေါ် ဆန်ကြဲပေးပါ …။ အင်္ဂါသားသမီး အလိုလိုနေရင်း … Read more